Jesse Lingard oo guul ku hoggaamiyay Man United kaddib markii ay ka soo adkaadeen West Ham… +SAWIRRO – Gool FM
(London) 19 Sebt 2021. Manchester United ayaa guul dirqi ah ka soo heshay kooxda West Ham oo ay ku booqatay garoonka London Stadium, kaddib markii ay kag soo adkaatay 1-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada toddobaadka 5-aad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood West Ham United iyo Manchester United ku kala nasteen bar-bardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 30-aad kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay laacibkooda Said Benrahma kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Jarrod Bowen.
35 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Manchester United ayaa dhalisa goolka bar-bardhaca, waxaana 1-1 ka dhigay weeraryahankooda reer Portugal ee Cristiano Ronaldo.
Daqiiqadii 89-aad Manchester United ayaa hoggaanka u qabatay u ciyaarta waxaana 1-2 ka dhigay Jesse Lingard oo caawin ay kaga timid saaxiibkiis Nemanja Matic.
Laakiin 90+ kooxda West Ham United ayaa loo dhigay rigoore, waxaana ka qasaariyay laacibkooda Mark Noble.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 1-2 ay kaga soo adkaatay Manchester United, kooxda West Ham United oo ay ku booqatay garoonka London Stadium, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulammada toddobaadka 5-aad ee horyaalka Premier League.